Qoys caruurtoodii dib u helay dagaal dheer kadib - NorSom News
Qoys caruurtoodii dib u helay dagaal dheer kadib
Qoys kasoo jeedo wadanka Romania oo laga qaatay shan ciyaal ah oo ay dhaleen ayaa ugu danbeyn ku guulaystay inay ciyaalkoodii dib u helaan mudaharaado iyo dagaal dheer kadib. Inkasto oo aysan dacwada loo haysto waalidiinta ciyaalka aysan wali dhamaan, hadana barnevern-ka iyo qoyska ayaa galay heshiis ah in ciyaalka gurigooda lagu soo celiyo, ayna ka wada shaqeeyaan sidii ciyaalka gurigooda ugu heli lahaayeen xanaano.
Qoyskan ayaa ilmaha laga qaatay, kadib markii lagu eedeeyay inay waalidku ilmaha u gaysteen dil ama garaac. Waalidka qoyska ayaa ka tirsan dariiqo kamid ah diinta krishtinka oo la yiraahdo PINSEVENNER oona aaminsan in ilmaha la yara-garaaci karo si loo baro waxa ay aaminsanyihiin. Halka taageerayaashii dariiqadan ay sheegeen in barnevernka ay ilmaha u qaateen ayaga oo ka baqayo in caruurtani ay dariiqadooda bartaan.
Dowlada Romania oo ay waalidka ilmaha dhalay kasoo jeedaan iyo taageerayaasha dariiqada ay ka tirsansinyihiin ayaa cadaadis xoogan saarey barnevernka Norwey, iyaga oo mudaharaado waaweyn ka abaabulayay magaalooyin badan oo caalamka. Taas oo ugu danbeyn keentay in waalidka ilmahooda loo soo celiyo, iyada oo ay wali socoto maxkamadeynta waalidka dhalay ilmaha. Dowlada Romania ayaa dhankeeda wafdi weyn usoo dirtay Norwey, iyaga oo sheegay in arintan qoyska ay wax u dhimi karto xiriirka ka dhaxeeyo labada wadan, hadii aan qoyskan ilmihiisa loo soo celin, oo loo awood sheegto.
Barnevernka ayaa horey ula wareegay caruur soomaali ah oo aad u badan, hadii la heli lahaa dowlada soomaaliyeed oo xoog badan ama jaaliyad soomaaliyeed oo isku xiran oo mudaharaad iyo dagaal sameeyo mar walbe oo qoys soomaali ah ilmaha xaq daro looga qaato, waxaa dhici kartay in qoysas badan ay ilmahooda dib u heli lahaayeen sida qoyskan Romania ka yimid oo kale.
Previous article195 qof oo 14 kamid ah ay soomaali tahay oo Norwey iska soo dhiibay bishii hore ee
Next articlePassportka dadka ka yimid Soomaaliya iyo 29 wadan oo kale oo lagu qorayo (ukjent) meesha dhalashada